Football Khabar » ‘किन ढाँट्नु ? रोनाल्डोलाई एकदमै मिस गरियो’
‘किन ढाँट्नु ? रोनाल्डोलाई एकदमै मिस गरियो’
स्पेनिस रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी टोनी क्रुसले यो सिजन आफूहरूले पूर्वहसहकर्मी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई एकदमै मिस गरेको बताएका छन् । अघिल्लो दिन क्लबसँग सम्झौता नवीकरण गरेपछि मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै जर्मन खेलाडीले यस्तो बताएका हुन् ।
रियल जारी सिजन एकदमै खराब अवस्थाबाट गुज्रियो । रियलले तीनवटा ठूला उपाधिमध्ये कुनै पनि जित्न सकेन । उसले मध्यसिजनमा क्लब विश्वकप जितेको थियो ।
रोनाल्डो गत सिजनको अन्त्यसँगै रियल छाडेर इटालियन युभेन्टसमा अनुबन्ध भएका थिए । रोनाल्डो हिँडेपछि रियलमा गोलकर्ता खेलाडीको चर्को अभाव देखिएको थियो । रोनाल्डोको गोल संख्यालाई अन्य खेलाडीले प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा रियलले समग्रमा खराब सिजन बितायो ।
सोही प्रसंगमा बोल्दै क्रुसले रियलका सबैजसो सहकर्मीले रोनाल्डोलाई मिस गरेको बताए । ‘रोनाल्डो गोल मेसिन खेलाडी थिए । उनले प्रशस्तै गोल गर्थे । टिमको हार–जितमा उनी निर्णायक हुन्थे,’ क्रुसले भने, ‘अवश्य पनि, रोनाल्डोजस्ता खेलाडीलाई जुन क्लबले पनि सम्झिन्छ ।’
उनले अघि थपे, ‘किन ढाँट्नु ? यहाँ मैले मात्रै हैन, सबै सहकर्मीले उनलाई सम्झिन्छन् । तर, उनी अब विगत हुन् । हामीले हामी भित्रैबाट निकास खोज्नुपर्छ ।’
क्रुसले रियल मड्रिडको यो सिजन खराब रहे पनि एक खराब सिजनले क्लबको इतिहास नछोप्ने बताए । ‘हामी एक सिजन असफल हुँदैमा हाम्रा सफलताका सिजन छोपिँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामी अर्को सिजन ठूला उपाधि जित्न तत्पर छौं ।’
क्रुसले आफू रियलमा खुसी रहेको पनि बताए । ‘म यहाँ आएदेखि खुसी छु । क्लब छाड्नेबारे मैले कहिल्यै पनि सोचिनँ,’ क्रुसले भने, ‘जहिले छाड्छु, म विजेता बनेर यहाँबाट जानेछु ।’
क्रुसले रियलसँग सन् २०२३ सम्मका सम्झौता गरेका छन् । उनी सन् २०१४ मा रियलमा अनुबन्ध भएका थिए ।
प्रकाशित मिति ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १४:४६